Olona ao anatiny
Samy miandry ny fitsanganan’ny governemanta avokoa ny tsirairay, ankehitriny. Efa dodona ny minisitera tsirairay avy, amin’izay ho minisitra ho avy eo. Anisan’izany ny eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena. Efa samy naneho ny heviny avokoa ny rehetra ny amin’izay ho olona hiasa amin’izany.
Fanirian’ny daholobe, mba tsy ho mpanao politika politisianina fa ho minisitra manao politika, hampandrosoana, ny taranja isanisany ary hanampy sy hanohana ny atleta. Tsy mila olona tia sehoseho fa minisitra miasa hampiroboroboana ny fanatanjahantena, amin’ny ankapobeny.
Tsy ho minisitra toloram-potsiny ihany koa fa mahay mikaroka sy mamaha olana ka hampiravona ireo disadisa tsy tambo isaina, misy amin’ireo federasiona maro, amin’izao fotoana izao. Minisitra avy amin’ny fanatanjahantena, tena mahafantatra ny marary sy mahafehy ny lalàna. Vonona hifanampy eo amin’ny fahazoam-bokatra fa tsy ho minisitra ampian’ny fanatanjahantena sanatria.
Minisitra tsy mitady tombontsoa manokana fa mahay manetry tena ary tsy manavaka fa ho tena raiamandrenin’ny taranja rehetra.